အထင်ကြီးကြောင်းဓာတ်ပုံများအခမဲ့အစီအစဉ် - GOOGLE ရဲ့ PICASA - အစီအစဉ်များ - 2019
ယနေ့တွင် remontka.pro စာဖတ်သူအနေဖြင့် discs တွေကိုနှင့်အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုမှတ်တမ်းတင်, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ sort နှင့်သိမ်းထားဖို့ program တစ်ခုရေးဖို့အယ်လ်ဘမ်ဖန်တီးဆုံးမခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ဖို့အဆိုပြုချက်ကိုနှင့်အတူစာတစ်စောင်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ငါမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာအတွက်, ဖြစ်ကောင်းရေးပါမည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်ထိုအခါမူကား, ငါထင်: အဘယ်ကြောင့်မဟုတ်လော တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မိမိတို့၏ဓါတ်ပုံရန်အလို့ငှာဆောင် ခဲ့. , ထို program အထက်ပါနှင့်ပိုပြီးအပေါငျးတို့သဖြစ်နိုင်သည့်ဓာတ်ပုံများ, အဘို့, ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်, အဲဒီမှာဖြစ်ပါသည် - Google ထံမှ Picasa ။
အပ်ဒိတ်: ဝမ်းနည်းပါတယ်, Google က Picasa စီမံကိန်းကိုပိတ်ထားသည်နှင့်ပိုပြီးတရားဝင် site မှဒေါင်းလုပ်လုပ်မရပါ။ သငျသညျဓါတ်ပုံများနှင့်ပုံရိပ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံးအခမဲ့အစီအစဉ်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များထဲတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်သည်ဟုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
Google က Picasa အင်္ဂါရပ်များ
screenshots များပြသနှင့်အစီအစဉ်၏အင်္ဂါရပ်များအချို့ကို Google ထံမှဓာတ်ပုံများများအတွက်အစီအစဉ်ကိုအခွင့်အလမ်းများအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်ဆွေးနွေးချက်ကိုဖော်ပြရန်ခင်မှာ:
စသည်တို့ကိုဦးထုပ်ထဲမှာတောင်မှအနိမ့်အရည်အသွေးပုံရိပ်တွေအပေါ်အလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိသမျှသောဓါတ်ပုံများ၏ခြေရာခံ, ဖမ်းယူ၏နေ့စွဲနှင့်နေရာအားဖြင့်သူတို့ကို sorting, ဖိုလ်ဒါလူ (ထိုအစီအစဉ်ကိုအလွယ်တကူနှင့်တိကျစွာမျက်နှာများကို detect, - သည်, သင်သည်ဤ၏အခြားဓါတ်ပုံ၏နာမတော်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး) ကိုတွေ့ပါလိမ့်မည်။ အယ်လ်ဘမ်နှင့် tags များဓါတ်ပုံများ sorting ကိုယ်ပိုင်။ မြင်သာထင်သာအရောင်အတွက်စီဓာတ်ပုံများ, ထပ်ဓာတ်ပုံများအဘို့အရှာဖွေရေး။
ဆုံးဓာတ်ပုံများ, အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြည့်စွက်ဆန့်ကျင်ဘက်အတူလုပ်ကိုင်, အရောင်အဝါ, ဓာတ်ပုံချို့ယွင်းချက်ဖယ်ရှားခြင်း, ဆိုဒ်ပြောင်းရန်, သီးနှံအခြားရိုးရှင်းသောပေမယ့်ထိရောက်တဲ့တည်းဖြတ်စစ်ဆင်ရေး။ စာရွက်စာတမ်းများ, ပတ်စ်ပို့နှင့်အခြားများအတွက်ဓါတ်ပုံများကိုဖန်တီးပါ။
Google+ မှာ (လိုအပ်ပါက) ရက်နေ့တွင်မှပုဂ္ဂလိကအယ်လ်ဘမ်နဲ့အတူအလိုအလျောက်ထပ်တူ
ကင်မရာ, စကင်နာ, webcam ကနေသွင်းကုန်ပုံရိပ်တွေ။ တစ်ဦး webcam သုံးပြီးပုံရိပ်တွေဖမ်းယူ။
အိမ်မှာပေးပို့လိုက်သည့်အစီအစဉ်၏သင့်ကိုယ်ပိုင်ပရင်တာ, ဒါမှမဟုတ်ပုံနှိပ်မိန့်အပေါ်သင်၏ဓါတ်ပုံများ Print (ဟုတ်ကဲ့, ရုရှားကိုလည်းလုပ်ဆောင်နေသည်) ။
ဓာတ်ပုံများ, ဓာတ်ပုံများမှဗီဒီယိုတစ်ဦး collage ဖန်တီးတင်ဆက်ဖန်တီးပိုစတာနှင့်ဓာတ်ပုံဆလိုက်ရှိုးအတွက်ရွေးချယ်ထားသောရုပ်ပုံများလက်ဆောင် CD ကိုသို့မဟုတ် DVD ကိုရေးပါ။ HTML ကို format နဲ့မှပို့ကုန်အယ်လ်ဘမ်။ ဓါတ်ပုံများကနေသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာများအတွက့် screensavers ကိုဖန်တီးပါ။
လူကြိုက်များကင်မရာ RAW ကို formats အပါအဝင်မျိုးစုံကို formats (အားလုံးမဟုတ်လျှင်) များအတွက်ပံ့ပိုးမှု။
CD ကိုနှင့်ဒီဗီဒီအပါအဝင်ဖြုတ် drives တွေကိုပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်, ဓါတ်ပုံများကို Back up ။
ငါအားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေစာရင်းပြီမသေချာဘူး, ဒါပေမယ့်ငါထင်, ဒါကြောင့်စာရင်းတွင်အထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံများ, အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုများအတွက် program ကို install လုပ်ခြင်း
လွတ် Google Picasa နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းအတွက် Download လုပ်, သင်အရာရှိတစ်ဦးရဲ့ site //picasa.google.com ကနေနိုင်သည် - ဒေါင်းလုပ်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအချိန်အများကြီးယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အင်္ဂါရပ်များစည်းစိမ်နေသော်လည်း, အစီအစဉ်ကိုရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ငါအားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုပရိုဂရမ်ထဲမှာပုံရိပ်တွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်မပြနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ, ဒါပေမယ့်စိတ်ဝင်စားဖြစ်သင့်ကြောင်းသူတို့ထဲကအချို့ပြပွဲနှင့်နားလည်ရန်ပိုပြီးလွယ်ကူပြီးအလွန်ကောင်းသောအ။
Google က Picasa အဓိကပြတင်းပေါက်
ချက်ချင်းပစ်လွှတ်ပြီးနောက် Google က Picasa ဓာတ်ပုံများရှာဘယ်မှာအတိအကျမေးပါလိမ့်မယ် - တစ်ခုလုံးကိုကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ရုံဖိုလ်ဒါရုပ်ပုံများ, Images ကို, နှငျ့ "My Documents" နှင့်ဆင်တူ။ ထို့အပြင် (ဒီ optional ကိုသည်) ကိုအလိုအလျောက်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်သင်၏ Google အကောင့်ချိတ်ဆက်ရန်, နောက်ဆုံးတော့ရှိတယ် (လမ်းဖြင့်အလွန်အဆင်ပြေ) ဓါတ်ပုံကြည့်ရှုများအတွက် default အနေနဲ့အစီအစဉ်ကိုအဖြစ် Picasa ဓာတ်ပုံ Viewer ကိုသတ်မှတ်ထားဖို့တောင်းနှင့်ပါလိမ့်မည်။
ထိုခဏခြင်းတွင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ကိုစတင်နှင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိသမျှဓာတ်ပုံများများအတွက်ရှာဖွေရန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော parameters တွေကိုအဆိုအရသူတို့ကို sorting ။ ပုံတွေအများကြီးပါလျှင်, ထိုသို့နာရီဝက်သို့မဟုတ်တစ်နာရီယူပေမယ့်စကင်ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုအပ်ပါဘူးနိုင်သည် - သင်က Google Picasa ထဲမှာရှိကွောငျးကြည့်ရှုရန်စတင်နိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံကနေ Menu ကိုတစ်ဦးကို item
စတင်အဘို့, တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါ menu ကိုရှေးခယျြစရာမှတဆင့် run နှင့် sub-ပစ္စည်းများရှိပါတယ်ပေးသောကြည့်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်အဓိကထိန်းချုပ်မှုအဓိက window တွင်တည်ရှိသည်:
လက်ဝဲ - ဖိုင်တွဲများ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာ, အယ်လ်ဘမ်များ, တစ်ဦးချင်းစီနှင့်စီမံကိန်းများနှင့်အတူဓာတ်ပုံများ။
အလယ်ဗဟိုတွင် - ရွေးချယ်ထား partition ကို၏ဓာတ်ပုံကို။
ထိပ် panel က, မျက်နှာများနှင့်အတူတည်နေရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူသာဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုသာဓာတ်ပုံများဖော်ပြရန် filter များပါဝင်သည်။
သင်သည်လက်ျာ pane ထဲကကိုမဆိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို select တဲ့အခါမှာ, သင်ပစ်ခတ်မှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်မြင်လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်အောက်ခြေရှိခလုတ်သုံးပြီးသင်တို့ရှိသမျှသည်ရွေးချယ်ထားသောဖိုင်တွဲများအတွက်ရိုက်ကူးရေးတည်နေရာ, ဒါမှမဟုတ်ဖိုလ်ဒါထဲမှာဓာတ်ပုံများအတွက်လက်ရှိ၌နေသောသူအပေါင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့နိုင်ပါသည်။ အလားတူပဲ (သင်သင့်ကိုယ်ပိုင် assign ချင်သော) တံဆိပ်များနှင့်အတူ။
ပုံပေါ်မှာ Right ကလစ်နှိပ် (ကျနော်ဖတ်ရှုဖို့အကြံပြု) အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုငျသောလုပ်ရပ်များတစ် menu ကဟုခေါ်သည်။
ဓာတ်ပုံအပေါ်ကို double-click နှိပ်. ပြုလုပ်တည်းဖြတ်ရေးများအတွက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်အချို့ဖြစ်နိုင်ခြေနေသောခေါင်းစဉ်:
အနီရောင်-မျက်စိဖယ်ရှားရေး, အမျိုးမျိုးသောသက်ရောက်မှုများထို့အပြင်, image ကိုလည်ပတ်။
ဓာတ်ပုံရှိလူအပေါငျးတို့သအလိုအလျှောက်တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်ပြသ, တည်းဖြတ် window ၏ညာဘက်ခြမ်းအပေါ်သတိပြုပါ။
ဓါတ်ပုံများ၏တစ်ဦး collage Creating
သင်နည်းလမ်းများစွာအတွက်ဓာတ်ပုံများကိုဝေမျှဖို့ tools တွေကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ရှိရာ, "Create" မီနူးကို item ဖွင့်ဆိုပါက: သင်တင်ဆက်မှုနဲ့ DVD ဒါမှမဟုတ် CD ကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်, ပိုစတာ, သင့်ကွန်ပျူတာများအတွက်မျက်နှာပြင်ချွေတာပေါ်ဓာတ်ပုံကိုတင်တစ်ခုသို့မဟုတ် collage ပါစေ။ အွန်လိုင်းတစ်ဦး collage စေရန်မည်သို့ :. ကိုလည်းကြည့်ပါ
ရွေးချယ်ထားသောဖိုင်တွဲတစ်ခု collage အတွက်ဥပမာတစ်ခု - ဒီစခရင်ပုံတွင်။ တည်နေရာ, ဓါတ်ပုံများအရေအတွက်, သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားနှင့်စတိုင်အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက် Collage ဖန်တီးဖို့: ကနေရှေးခယျြဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုလည်းရွေးချယ်ထားသောဓာတ်ပုံများကနေဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျ, ဓာတ်ပုံများအကြားအကူးအပြောင်းကိုစိတ်ကြိုက်မှုတ်သံကိုထည့်သွင်း, frame ကိုအပေါ်ဓာတ်ပုံဖြတ်တောက်, ဆုံးဖြတ်ချက်, လက်မှတ်နှင့်အခြား setting များကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံကို Back up
သငျသညျမီနူးကို item "Tools များ" ကိုသွားလျှင်, ထိုပြည်၌သင်တို့သည် backup လုပ်ထားတည်ဆဲဓာတ်ပုံများဖို့အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း CD ကိုနှင့်ဒီဗီဒီအဖြစ်တစ်ခုက ISO disk ကိုပုံရိပ်ပေါ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါထူးဆန်းသော feature ကို backup လုပ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့် "စမတ်" ကိုဖန်ဆင်းသည်ကိုသင်ကူးယူလာမယ့်အချိန်, default အနေဖြင့်အသစ်သာတက်ကျောထောက်နောက်ခံနှင့်ဓါတ်ပုံတွေကိုပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မည်။
ဤသူသည်ငါငါသည်သင်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်မည်ထင် Google က Picasa ငါ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ က "File" menu မှာတွေ့နိုင်ပါသည် - - ဟုတ်ကဲ့, ကျွန်မအစီအစဉ်မှဓာတ်ပုံများ print ထုတ်ဖို့အမိန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးရေးသားခဲ့သည် "။ အမိန့်ဓာတ်ပုံကိုပုံနှိပ်ခြင်း" ဟုအဆိုပါ